ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တိုက်ယူ၍မရ၊ တည်ဆောက်ယူရခြင်းဖြစ်၊ တည်ဆောက်ဖို့ဆိုလျှင် ငြိမ်းချမ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တိုက်ယူ၍မရ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ယူရပြီး တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ် ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က နေ ပြည်တော် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန(NRPC)တွင်ပြုလုပ်သည့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်သော တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သ ဘောတူစာချုပ်အကောင်အထည် ဖော်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအ ဝေး(JICM) အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် ယင်းသို့ ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က”ကျွန်မတို့ကို ဒီငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် လူတိုင်း၊ လူ တိုင်းတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းကအ ရေးကြီးပါတယ်။ အဖွဲ့တိုင်း အဖွဲ့ တိုင်း တစ်ဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းက အ ရေးကြီးပါတယ်။ အဖွဲ့တိုင်း အဖွဲ့ တိုင်းကလည်း ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အ တွက် ကိုယ်တာဝန်ယူရသလို ကိုယ့် ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက် လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်တွေအတွက်လည်း တာဝန်ယူ ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက် တည်း ကိုယ်တစ်ဖွဲ့တည်းသွားချင် တဲ့လမ်းသွားနေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်ပါ ဘူး။ စုဖွဲ့ပြီးမှ အားလုံးပူးပေါင်းပြီးမှ ကျွန်မတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရ နိုင်မှာပါ။ ကျွန်မတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့အတွက် အရေးကြီးတာက တော့ ယုံကြည်မှုပဲ။ ယုံကြည်မှုဆို တာဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည် မှုထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပဲ။ ကိုယ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရအောင်လုပ်နိုင် တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဦးတည်သွားပြီးတော့ လမ်း လျှောက်သွားနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ ယုံကြည်မှု မရှိလို့ရှိရင်တော့ တစ် ခြားလူတွေကို ယုံကြည်တာ မယုံ ကြည်တာက အလကားပဲ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်မယုံကြည်ဘဲနဲ့၊ ကိုယ့်အဖွဲ့ကို ကိုယ်မယုံကြည်ဘဲ နဲ့တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ် လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြော သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲတွင်ပါနေသောအဖွဲ့သီးသီးမှ တချို့က ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တကယ်ပဲယုံကြည်ရဲ့လား၊အစိုးရကရော ယုံကြည်ရဲ့လား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့အားလုံးကယုံကြည်ရဲ့ လားဆို တာမေးကြကြောင်း ¤င်း ကဆိုသည်။
”ဒီမေးခွန်းမေးတာဟာ ကျွန်မအနေနဲ့ နည်းနည်းအစီအစဉ်မကျဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်း ရေးဖြစ်စဉ်ထဲဝင်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မလဲဆိုတာ မဆွေးနွေး ဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုကို တကယ်ယုံတာလား တကယ်လိုချင်တာလားလို့ ဘယ်လိုမေးမလဲ။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံနဲ့သင့်တော်တဲ့၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင် စုဆိုတာဘယ်လိုပြည်ထောင်စု မျိုးလဲ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ မဆွေးနွေးခင်မှာ ဒါကို တကယ်ပဲလိုချင်လား၊ မလိုချင်ဘူး လားလို့မေးနေတာကတော့ ကျွန်မ တို့အတွက် ဘာမှအထောက်အ ကူမဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့ အကောင်းဆုံးက တော့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည် ထောင်စုကို တကယ်ပဲ အခုဒီအစိုးရက လိုချင်လား၊ မလိုချင်ဘူးလား ဆိုတာ သိချင်လို့ရှိလို့ရှိရင် ဒီငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံထဲမှာ ပါဝင်ဆွေး နွေးပြီးတော့ ဘယ်လိုဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဦးတည် မယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဒါအဖြေ ပေါ်မယ်လို့ ကျွန်မကတော့ ဒီလို ပဲပြောချင်ပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
တက်ရောက်လာသော ကိုယ် စားလှယ်များအားလုံး တကယ့်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ဖို့လိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးထက်ကောင်းသည့်အခြေအနေမှာ ဘာမှမရှိကြောင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တိုက်ယူလို့ မရကြောင်း၊ တည်ဆောက်ယူရ ကြောင်း၊ တည်ဆောက်ဖို့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလိုကြောင်း၊ နောင်လာနောက် သားများအတွက် လိုချင်သော နိုင်ငံ တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကို အချင်းချင်းညှိနှိုင်းသောနေရာတွင် အိပ်မက်လည်းမက်တတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အိပ်မက်ကိုလည်း အကောင်အ ထည်ဖော်တတ်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကိစ္စ အခေါ်အဝေါ်မှန်ကန်စွာ ရေးသားသုံးစွဲရန် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ?
ထိုင်းနိုင်ငံအား လိင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သောနိုင်ငံအဖြစ်သုံးစွဲခြင်းကို ဝန်ကြီးချုပ်ကန်?
ကျုံပျော်တွင် သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ပြန် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၊ တစ်ဦးသေ၊ ၂၉ ဦးဒ
Space X အာကာသယာဉ် Crew Dragon ကမ္ဘာသို့ အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ဆင်းသက်